Wɔyɛɛ Adaka no (1-9)
Ɔpon no (10-16)
Kaneadua no (17-24)
Aduhuam afɔremuka no (25-29)
37 Afei Besalel+ de ɔkanto dua yɛɛ Adaka no.+ Ɔyɛɛ ne tenten basafa* abien ne fã, ne tɛtrɛtɛ basafa baako ne fã, na efi soro besi fam yɛ basafa baako ne fã.+ 2 Ɔde sika kɔkɔɔ amapa faa emu ne ɛho nyinaa, na ɔde sika kɔkɔɔ no bi totoo ano hyiae.+ 3 Afei ɔde sika kɔkɔɔ yɛɛ nkawa anan bobɔɔ baabi wɔ ne nan no biara soro; nkawa abien wɔ ha a, na abien nso wɔ ha. 4 Ɛnna ɔde ɔkanto dua sen nnua nteaanteaa, na ɔde sika kɔkɔɔ faa ho nyinaa.+ 5 Afei ɔde nnua no hyehyɛɛ nkawa no mu wɔ Adaka no nkyɛn na wɔde asoa Adaka no.+ 6 Ɔde sika kɔkɔɔ amapa yɛɛ ne mmuaso.+ Ná ne tenten yɛ basafa abien ne fã, na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa baako ne fã.+ 7 Afei ɔde hamma* boroo sika kɔkɔɔ yɛɛ kerubim abien,+ na ɔde sisii mmuaso+ no afã abien no nyinaa. 8 Ɔde kerubim no sisii mmuaso no afã abien no nyinaa. Ɔde kerubim baako sii mmuaso no fã ha, na ɔde baako nso sii ɔfã ha. 9 Ná kerubim abien no atrɛtrɛw wɔn ntaban mu kɔ soro, na ɛkataa adaka no mmuaso so.+ Kerubim no dii nhwɛanim, na na wɔn anim kyerɛ mmuaso no.+ 10 Afei ɔde ɔkanto dua yɛɛ ɔpon no.+ Ɔyɛɛ ne tenten basafa abien, ne tɛtrɛtɛ basafa baako, na efi soro besi fam basafa baako ne fã.+ 11 Ɔde sika kɔkɔɔ amapa faa ho nyinaa, na ɔde sika kɔkɔɔ no bi totoo ano hyiae. 12 Afei ɔyɛɛ mfomfamho a ne tɛtrɛtɛ bɛyɛ sɛ nsayam* twaa ho hyiae, na ɔde sika kɔkɔɔ twaa mfomfamho no ho hyiae. 13 Na ɔde sika kɔkɔɔ yɛɛ nkawa anan, na ɔde nkawa no bobɔɔ ntwea anan no ho, baabi a ne nan anan no sisi no. 14 Ná nkawa no bɛn mfomfamho a ɔde atwa ɔpon no ho ahyia no; ɛno na na wɔde nnua bɛhyehyɛ mu de asoa ɔpon no. 15 Afei ɔde ɔkanto dua sen nnua nteaanteaa a wɔde bɛsoa ɔpon no, na ɔde sika kɔkɔɔ faa ho nyinaa. 16 Ɛno akyi no, ɔde sika kɔkɔɔ amapa yɛɛ nneɛma a wɔde besisi ɔpon no so: nyowa, nkuruwa nketewa ne akɛse, ne nkankyee a wɔde behwie afɔrebɔ nsã.+ 17 Afei ɔde hamma boroo sika kɔkɔɔ amapa de yɛɛ kaneadua+ no. Sɛnea ɔyɛɛ no ni: Ɔma enyaa nea ebegyina so, ɛnan, nkuruwa, funuma, ne nhwiren. Ɔyɛɛ ne nyinaa boom baako.+ 18 Kaneadua no nyaa nkorabata asia, nkorabata abiɛsa wɔ ɔfã baako na abiɛsa nso wɔ ɔfã a aka no. 19 Ɔmaa ɔfã baako nkorabata biara nyaa nkuruwa abiɛsa a ɛte sɛ aborɔfo nkate nhwiren, funuma, ne nhwiren; wufi funuma so a, na wokɔ nhwiren so. Ɔmaa ɔfã a aka no nso nkorabata biara nyaa nkuruwa abiɛsa a ɛte sɛ aborɔfo nkate nhwiren, funuma, ne nhwiren; wufi funuma so a, na wokɔ nhwiren so. Saa na ɔyɛɛ nkorabata asia a ɛwowɔ kaneadua no nan ho nyinaa. 20 Afei ɔyɛɛ nkuruwa anan a ɛte sɛ aborɔfo nkate nhwiren wɔ kaneadua no nan ho. Na ɔyɛɛ funuma ne nhwiren nso wɔ ho; wufi funuma so a, na wokɔ nhwiren so. 21 Faako a nkorabata abien a edi kan no pue fi kaneadua no ho no, ɔyɛɛ funuma wɔ ase; faako a nkorabata abien a edi hɔ no pue no, ɔyɛɛ funuma wɔ ase; faako a nkorabata abien a etwa to no pue no nso, ɔyɛɛ funuma wɔ ase. Enti baabi a nkorabata asia no paapae wɔ kaneadua no ho biara, ɔyɛɛ bi wɔ ase. 22 Funuma ne nkorabata ne kaneadua mu no nyinaa, ɔde hamma boroo sika kɔkɔɔ amapa na ɔyɛɛ ne nyinaa boom baako. 23 Ɛnna ɔde sika kɔkɔɔ amapa yɛɛ nkanea ason,+ ɛho nneɛma a wɔde fa ogya ne nkankyee a wɔde ogya gu mu. 24 Sika kɔkɔɔ amapa dwetikɛse* baako na ɔde yɛɛ kaneadua no ne ɛho nneɛma nyinaa. 25 Afei ɔde ɔkanto dua yɛɛ aduhuam afɔremuka.+ N’afã anan nyinaa ɔyɛɛ no pɛpɛɛpɛ; ɔmaa ne tenten yɛɛ basafa baako, na ne tɛtrɛtɛ nso yɛɛ basafa baako; efi fam kosi soro nso yɛɛ basafa abien. Ɔyɛɛ ɛne ne mmɛn nyinaa boom.+ 26 Ɔde sika kɔkɔɔ amapa faa ho nyinaa, ne soro, nkyɛnkyɛn, ne ne mmɛn ho, na ɔde sika kɔkɔɔ totoo ano hyiae. 27 Afei baabi a ɔde sika kɔkɔɔ totoo ano hyiae no, ɔde sika kɔkɔɔ yɛɛ nkawa abien abien wɔ n’ase, ebi wɔ ɔfã ha na ebi nso wɔ ɔfã ha. Ɛno na na wɔde nnua no bɛhyehyɛ mu de asoa. 28 Ɛno akyi no, ɔde ɔkanto dua sen nnua nteaanteaa a wɔde bɛsoa, na ɔde sika kɔkɔɔ faa ho nyinaa. 29 Afei ɔyɛɛ ɔsrango kronkron+ no ne aduhuam+ kurennyenn a wɔafra no yiye paa no.